Fanorenana kidoro - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Lisitry ny fako Fako hafa & fanodinana Mampihena ny fakonao Tobim-pako Central Coast Tatitra ny fako nariana Famerenana metaly simba Light Globe, Finday ary Fanorenana Batterie Syringe azo antoka sy fanariana fanjaitra Fako maloto Fanodinana fako elektronika Fanorenana kidoro
Tsy vitan'ny hoe mamonjy toerana fanariam-pako voafetra ny kidoro fanodinana, fa mitsitsy loharanon-karena ihany koa.
Ny mpiasan'ny Central Coast Council dia maka kidoro avy amin'ny fanariam-pako isan'andro, izay naterina na ny Buttonderry na Woy Woy Fitantanana ny fako. Esorina avy eo ny kidoro mba hahazoana, hampiasaina ary hanodina ireo singa metaly izay alefa any amin'ireo mpiantoka antsika mba hamerenana ho vokatra vaovao isan-karazany.
Misy vola miditra manary kidoro na aiza na aiza Tobim-pako an'ny filankevitra.
Ny kidoro koa dia azo angonina maimaim-poana amin'ny alalan'ny serivisy fanangonana amoron-dalana azon'ny ankamaroan'ny tokantrano.